Bir lala yaabay oo meel ay ka timid la aqoon oo lagu arkay saxaraha gobol ka mid ah Mareykanka – Calanka.com
Bir lala yaabay oo meel ay ka timid la aqoon oo lagu arkay saxaraha gobol ka mid ah Mareykanka
in Dibedda — by admin —	November 25, 2020
Bir meel dhul ah qotonta, oo waxa ay tahay la garan la’yahay ayaa lagu arkay saxaraha gobolka Utah ee dalka Mareykanka.
Khubaro ka socda xannaanada xayawaannada duur joogta ayaa arkay birtan oo qaabka ay u dhisan tahay uu yahay “wax qeyrul-caadi ah”, xilli ay tirinayeen idaha geesaha waaweyn ee duurka jooga.
Cilmi-baareyaashan oo birtaas layaabka leh dusha sare ka arkay iyagoo diyaarad helicopter ah saaran, ayaa aad ula fajacay waxa la kulmeen.
Goobta “mucjisadan” lagu arkay waa lama dagaanka dhinaca koonfur-bari ee gobolka Utah.
Birtan waxaa la qotomiyay dhagaxyo dhexdood, sida ay khubarada soo tabiyeen.
Ma jirin wax calaamado ah muujinaya cidda birtaas qotomisay, dhirirkeeduna waa qiyaastii 10 ilaa 12 ft ama 3.6 mitir.
Duuliyihii diyaaraddaas – oo ah nooca umaatiga u kaca – Bret Hutchings, ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta maxalliga ah ku yidhi: “Birtaasi waxay ahayd sheygii ugu yaabka badnaa ee aan la kulmo abid, anigoo sannado badan duuliye ahaa.”
Mr Hutchings ayaa sheegay in seynisyahan tirinayay idaha geesaha waaweyn leh oo diyaaradda saarnaa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee arkay birtaas “qeyrul-caadiga” ah, xilli ay hawada ku jireen.
“Wuxuu yidhi, ‘Whoa, whoa, whoa, dib usoo jeedso, dib usoo jeedso!’. Anigana waxaa iri, ‘Maxaa dhacay?’. Kaddib ayuu yidhi, ‘Wax ayaa halkaas yaalla – waa inaan soo aragno’,” ayuu yidhi Mr Hutchings.
Mr Hutchings wuxuu sheegay in birtaas ay suurtagal tahay inuu meesha qotomiyay “qof farshaxamiiste cusub ah”, ama qof jecel filimkii 2001: A Space Odyssey, oo la jilay sanadkii 1968-kii, islamarkaana uu hage ka ahaa Stanley Kubrick.
Filimkaas waxaa lagu muujiyay biro madow oo ay dhulka ku sureen nooleyaal qalaad, sida laga xiganayay buug uu qoray Arthur C Clarke.
Maamulka gobolka Utah ayaa dadka baraha bulshada uga codsaday inay u sharraxaan cidda birtaas meesha qotomisay, haddii ay wax war ah ka hayaan.
Bayaan ay soo saareen ayey ku sheegeen inay dib ka xaqiijin doonaan haddii “loo baahdo in baadhitaanno la sameeyo.”
“Waa sharci darro in dhismeyaal ama biro la qotomiyo iyadoo aan fasax laga heysanin maamulka deegaanka, haddii aad tahay bani’aadan ama noole qalaad oo meel kale ka yimid toona,” ayaalagu yidhi warka kasoo baxay mas’uuliyiinta.
Saraakiishu ma aysan sheegin tilmaanta saxda ah ee goobta birtaas lagu arkay, iyagoo ka cabsi qaba in cilmi baareyaal xog kasoo aruurinaya ay aadaan, kaddibna halkaas ku xayirmaan.
Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay in birtaas ay iyagu meesha qotomiyeen.
Idaha geesaha waaweyn leh ee ay khubaradu tirinayeen waxay muwaadiniin ka yihiin qeybo badan oo ka mid ah koonfurta gobolka Utah ee dalka Mareykanka.